ငါဘယ်လိုတရားစကားတော်၌အ UNDERSCORE ကိုဖယ်ရှားကြပါ - စကားလုံး - 2019
Microsoft Word ကိုမှုကိုအလေးအနက်အမှားများကို Remove
လူကြိုက်အများဆုံးသောစာသားအယ်ဒီတာခုနှစ်တွင်က MS နှုတ်ကပတ်တော်ကို built-in စာလုံးပေါင်းစစ်ပါရှိသည်။ ယင်းအော်တိုပြင်အင်္ဂါရပ် enabled လျှင်ဒီတော့အချို့သောအမှားများသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်သည်အလိုအလျောက်တညျ့ပါလိမ့်မည်။ program ကိုတစ်ဦးအထူးသဖြင့်စကားလုံးအမှားထဲမှာတွေ့, တခါတရံတောင်သိမပါဘူးဆိုရင်, သူမနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို (စကားစာပိုဒ်တိုများ), အနီရောင်လှိုင်းအတက်အကျလိုင်းတင်ပြလိုပါသည်။
မှတ်ချက်: နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုလည်းစာလုံးပေါင်း-checker သည်၏ဘာသာစကားကိုထက်အခြားဘာသာစကားတစ်ခုကို၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ပုထူ ထပ်. အနီရောင်စကားလုံးများကိုအလေးပေးဖော်ပြသည်။
သငျသညျစိတ်ကူးနိုင်သကဲ့သို့, ဤသူအပေါင်းတို့သဒ္ဒါမှားယွင်းမှုများ, ထိုယူဆချက် ofrograficheskie ပေါ်တွင်အသုံးပြုသူမှညွှန်ပြနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်း underscore နှင့်များစွာသောအမှုများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသို့သော်အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုအလေးပေးနှင့်သူမ၏စကားကိုမသိရ။ သင်အလုပ်လုပ်နေကြစာရွက်စာတမ်းအတွက်ဤ "အရိပ်လက္ခဏာ" ကိုကြည့်ပါရန်ဆန္ဒရှိကြဘူးလျှင်, သင်ဆက်ဆက်နှုတ်ကပတ်တော်၌အမှားအယွင်းများ၏မျဉ်းသားဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့မည်ပုံပေါ်မှာငါတို့လမ်းညွှန်စိတ်ဝင်စားကြလိမ့်မည်။
1. menu ကိုဖွင့်ပါ "File"နှုတ်ကပတ်တော်ကို 2012 ခုနှစ် control panel ထဲကထိပ်မှာ leftmost ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် - 2016, ဒါမှမဟုတ် click နှိပ်ခလုတ်ပေါ် "က MS Office ကို"သငျသညျထို program ၏အစောပိုင်းဗားရှင်းကိုအသုံးပြုနေလျှင်။
2. Expand "န့်သတ်ချက်များ" (ယခင် "တစ်ဦးကနှုတ်ကပတ်တော်ကို Options ကို").
3. ဖွင့်လှစ်သောအပိုင်း box ကို Select လုပ်ပါ, "စာလုံးပေါင်း".
4. Locate "ဟုအဆိုပါဖိုင် Exception" ထိုသူနှစ်ယောက်အချက်များရှိတစ်ဦးစစ်ဆေးမှတ်သတ်မှတ်ထား "သာဤစာရွက်စာတမ်းများတွင် ... အမှား Hide".
သငျသညျကိုပြတင်းပေါက်ပိတ်ဖို့ပြီးနောက် 5. "န့်သတ်ချက်များ"သင်ဤစာသားကိုစာရွက်စာတမ်း obsessive အနီရောင်မျဉ်းသားအတွက်မမြင်ရပါလိမ့်မယ်။
အဘိဓာန်မှစကားများ Add နှင့်မျဉ်းသား
သမ်မာကမျြးကြောင့်မှုကိုအလေးအနက်သောအရာကိုတစ်ဦးအထူးသဖြင့်စကားလုံး, မသိသည့်အခါမကြာခဏ, program ကိုကိုလည်းမျဉ်းသားစကားလုံးများကိုပေါ်မှာ right ကလစ် နှိပ်. အပြီးတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်ရာဆုံးမခြင်းများအတွက်ရွေးချယ်စရာပေးထားပါတယ်။ သငျသညျရှေးခယျြစရာရှိပစ္စုပ္ပန်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကစကားလုံးများ၏မှန်ကန်သောစာလုံးပေါင်း၏သေချာ, ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကြောင့် fix ချင်ကြဘူးမကြိုက်ဘူးလျှင်, အဘိဓါန်သမ်မာကမျြးဖို့စကားလုံးဖြည့်စွက်သို့မဟုတ် check လုပ်ထားဖြတ်သန်းနေဖြင့်အနီရောင်မျဉ်းသားကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
1. မျဉ်းသားစကားလုံးပေါ်မှာ Right-click လုပ်ပါ။
ရလဒ် menu ကို 2, သင်ချင်သော command ကို select လုပ်ပါ: "Skip" သို့မဟုတ် "အဘိဓါန်မှ Add".
3. မျဉ်းသားပျောက်ကွယ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်မယ်ဆိုရင်ခြေလှမ်းများပြန်လုပ် 1-2 နှင့်အခြားစကားများ။
မှတ်ချက်: သင်မကြာခဏအဘိဓာန်ထည့်သွင်း, MS Office applications များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေလျှင်, တစ်ချိန်ချိန်မသိသောစကားလုံးများကို, သင်ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့အတွက် Microsoft မှဤစကားအလုံးစုံတို့ကိုပေးပို့ကြောင်းအကြံပြုလိမ့်မည်။ ဒါဟာကြောင့်သင့်ရဲ့အားထုတ်မှုမှအဘိစာသားကိုအယ်ဒီတာပိုပြီးကျယ်ပြန့်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်နိုင်သည်။
တကယ်တော့ကြောင်းနှုတ်ကပတ်တော်၌ယင်းမျဉ်းသားဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့တပြင်လုံးကိုလျှို့ဝှက်ပါပဲ။ အခုဆိုရင်သင်ဤ Multi-functional ဖြစ်စေ program တစ်ခုအကြောင်းကိုပိုမိုသိနှင့်ပင်၎င်း၏ဝေါဟာရ replenish ဖို့ဘယ်လိုသိကြ၏။ ကြောင်း မှန်မှန်ကန်ကန်ရေးပါနှင့်မအမှားတွေလုပ်, သင်တို့ကိုငါအလုပ်နှင့်သင်တန်းများအတွက်အောင်မြင်မှုအလိုရှိ၏။